Xildhibaanno rajo fiican ka qaba inuu Madaxweynuhu dhaqsi u dhameyn doono Khilaafka Baarlamaanka – Kalfadhi
Xildhibaanno rajo fiican ka qaba inuu Madaxweynuhu dhaqsi u dhameyn doono Khilaafka Baarlamaanka
Xildhibaanno ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soodhaweeyay hadalkii Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee ahaa inuu dhex dhexaadin doono Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, oo uu soo kala dhex galay khilaaf sababay inuu Aqalka Sare xiriirka u jaro Golaha Shacabka.
Xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed (Taaw) ayaa u sheegay kalfadhi in ay soo dhawaynayaan dhex dhexaadinta Madaxweynaha Soomaaliya ee Labada Aqal, “si looga gudbo” buu yiri “Khilaafka ka dhax taagan Golayaasha Baarlamaanka”. Waxa uu sheegay inuu Madaxweynuhu si dhib yar ku dhameyn doono khilaafkaas. “Waa arin fiican, waxaana aaminsanahay in lagu guulaysan karo” ayuu yiri Xildhibaan Axmed (Taaw).
Xildhibaanku waxa uu intaas raaciyey in uu Madaxweynuhu u haysto fursad dahabi ah, si dhaqsiya xal uga gaariddeeda khilaafkaas, inta ay Labada Aqal u xiran yihiin kulamada Baarlamaanka. “Waxaa la haystaa laba bilood, oo lagu dhamayn karo dhamaan khilaaf ka taagan (baarlamaanka)” ayuu Xildhibaan Taaw ku yiri Kalfadhi.
Isaga oo wax yar kasoo qaadaya waxa ay Labada Gole ee Baarlamaanku isku hayaan ayuu Xildhibaan Taaw, sidoo kale, sheegay in guddi uu sheegay inuu Madaxweynuhu u xil-saari doono ay u sahlanaan doonto iney xal ka gaaraan khilaafkaas. “Ilaa iyo hadda lama wada hadlin, laakiin waxaan ka war sugaynaa guddiga isku-dhafka ah ee uu magacaabi doono Madaxweynaha Soomaaliya” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed (Taaw).
Sanatar Axmed Cabdixafiid (Bulsho), oo la hadlay Kalfadhi, ayaa isna soo dhaweeyay dhex-dhexaadin kasta oo laga dhex sameeyo Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, “si laysugu soodhawaado” buu yiri. “Waxaan diyaar u nahay in wax kasta lagu dhameeyo wada-hadal” ayuu sidoo kale yiri Sanatar Axmed (Bulsho).
Sanatarku waxa uu sheegay inuu aad uga xumaaday go’aanka Aqlka Sare uu ku joojiyay wada-shaqayntii kala dhaxaysay Golaha Shacabka, isagoo yiri ” waa waajib uu nafarayo dastuurka wad-shaqaynta Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya”, taas oo ay u muuqato inuu ula jeedo inuusan Aqalka Sare awood u lahayn inuu laalo awood dastuuriya.
Intaas waxa uu Sanatar Bulsho raaciyey in ay jiraan eedaymaha uu soo jeediyay Aqalka Sare. “Waa sax in uu Aqalka Sare qabo tabasho badan, oo dhanka awoodda ah, laakiin waa in loo xaliiyaa si kale” ayuu yiri Sanatar Bulsho, oo intaas ku daray inuu rajo weyn ka qabo in laga gudbi doona khilaafka hadda taagan, loona baahan yahay in wax laga barto.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray 1-dii Janaayo ee sanadkan qoraal uu xiriika ugu jaray Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxa uuna warbahinta la wadaagay 2-dii bishan, waana markii ugu horeysay oo uu soo shaac baxo khilaaf heerkaas gaarsiisan oo soo kala dhex gala Golaha Wakiillada Dalka.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa Xarunta Golaha Shacabka ka sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo soo afjari lahaa tabashada Aqalka Sare. “Waxaan ka shaqeyn doonaa inta uu xiran yahay Kalfadhiga 4-aad sidii loo xalin lahaa tabashada Aqalka Sare” ayuu yiri Guddoomiye Mursal. “Waan ku kalsoonahay inaan xal ka gaari karnno tabashadooda, waayo waa rag wadaniyiin ah oo ay ka go’an tahay iney dowladnimadu ay xoogeysato”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Guddiga Dastuurka Baarlamaanka Soomaaliya oo soo gabagabeeyey dib u eegista Cutubyada Dastuurka